I-Best Best-Footage Movies Horror
Le Ngqungquthela Ekhohlakeleyo Yenza Yonke Inene Yenene
Ifomati "efunyenweyo" ifakwe njengesiqhelo seefilimu eziphazamisayo ngexesha lama-2000, kodwa i-glut yeefilimu ezinjalo ziye zakhukhula kwiimarike kunye nemimiselo engaphantsi kwesitayela esisimanzi. Ukukunceda ukuhlenga phakathi kweenduli ze-mediocrity, nantsi i-rockund of the best-footage-footage flicks, in down order. Ezi ziqinileyo "zifunyenwe iifayile" kunye namaxwebhu angabonakali, ngoko ke kungabandakanyi ifilimu ezintle "njengeLake Mungo," "emva kweMask" kunye ne "Ghostwatch."
'Mbonise A' (2010)
Le nto ixakekile kodwa iyenze kakuhle, isenzo seBritani esinobukrakra sisenza uhlobo lwevidiyo efunyenwe kwi-camcorder kwindawo yokubulala, ebonisa iimfihlelo zentsapho ebonakalayo eqhelekileyo ehamba phambili eqhuba iiveki ezimbalwa.
"I-Den" yinto enamandla "yokuhlasela ekhaya" ifilimu ephinda ibe yinto efanayo yokutshatyalaliswa okwenyukayo kwindwendwe yasekhaya efana neyokuba "Abahambi," "Ulandelayo" kunye ne "Imidlalo Ehlekayo" enamandla. Isiva sokungenakunceda sithinteka - ababukeli bangakwazi ukuzibeka ngokukhawuleza kwendima yexhoba lokutshitshiswa kobunikazi okanye ukukhwabanisa kuthathwa ngokugqithiseleyo.
Ngabo "ababhaliweyo" kwi-woods "efanayo", kukho ukucinga ukuba "Iprojekthi ye-Blair Witch" yaqhutyelwa ngu "I-Broadcast Broadcast", kodwa loo nto ayifuni kwimpumelelo yeemfihlakalo ezikhethiweyo kule nqaku efunyenwe ngaphambili ukufikelela malunga nokufikelela kwekhefu kwimikhosi efuna iJersey Devil.
Ukuqhaqha kwavela eNorway, "iTroll Hunter" yinto ekhangeleleneyo yokwenziwa kwenkcubeko yaseScandinavia kwindlela yokuhlaziywa ngayo "ifumaneka", nangona ababukeli bezilindeleke ukuba bahlelwe yinto edibeneyo bangadaniswa nePG-13.
© Magnet Ukukhulula
Nangona uqhelaniswe neziganeko ze- Jonestown Massacre , ukubona ukuba kudlalwa ngokucacileyo kwesikrini njengoko kuluhlu oluphinda lugqitywe ngokugqithiseleyo lubonakalisa ubunzima, obukhulu kunobomi bentlekele. Ifilimu yomhlaba eneempembelelo ezinobungozi kunye nomzila wesalathiso ocacileyo ukwanda kwengqondo.
© Ukuzonwabisa One
Yiyiphi "i-Hunted" ayinako okokuqala eyenziwa ekusebenziseni. Ibali le-pair ye-TV ye-wannabe igxotha i-pilot episode of what they hope that will be taken as a hunting / nature series - kuphela ukuhlangabezana nequmrhu elingaphezu kwezinto ezithintekayo kwihlathi kunokusondela ukuthatha ingqiqo yokuxhatshazwa kwepanoid eyenza "iProjekthi ye-Blair Witch" kule mpu meko ngo-1999, ngokufanayo isetyenziswe kwisandi esilungeleyo sehlathi ukuvelisa ukwesaba.
Akunakwenzeka ngokwenene njengabantu abathile belo hlobo, oku kufumaneka imifanekiso / iifayile ezithandekayo malunga neengxelo zenkcubeko ezithengisa inyaniso emva kweengcamango zobuqili zihlakaniphile, zibhalwa kakuhle kwaye zakha ukuxhatshazwa kwe-paranoid ngokukhawuleza ukuya kutsho ekugqibeleni.
Inzala ebandayo yeempembelelo (kunye namaxesha aqhelekileyo) "i-mondo" yee-60s kunye nee-70, le fayile eyingcamango ixhaphaza imimiselo yeendawo "zokuzikhusela" kwiindawo eziqhelekileyo (kule meko, i-Amazon), ukuyibeka ukuxhatshazwa ngokwesini kunye nokubulawa kwezilwanyana zangempela-ubomi, okwenza kube enye yeemafilimu ezinzima kakhulu kwixesha lonke. Ukungaqondakali nokubi kodwa kungenakulibaleka nokuhlaselwa kwindlela yokusetyenziswa kweempendulo zengxowankulu ezidutshulwa ngabenzi bamabhayisikobho abaye balahleka emahlathini ase-Amazonian. Kuyinto enengqiqo, eqinisweni, umlawuli uMggero Deodato wecala ngokubulala kwaye kwafuneka abonise ukuba ukufa kwale filimu - ngokuqinisekileyo, ukufa kwabantu - kwakubonakele.
Insightful and darkly humorous, le kid killer kid flick skewers yenkcubeko yamanani enyukliya yaseMelika, unqulo oluqinileyo kunye nokunyanyiswa kwamayeza.
"I-Exorcism Yokugqibela" ifunyenwe imifanekiso eya kwintsimi yokukhwabanisa kunye neqondo elincinci lezinto ezithandekayo, amahlwitha kunye nokumangaliswa kwamangalisa. Ukuba ngaba kuphela uhambo olubi luye lwafana.
'REC 1-2' / 'iKarantine' (2007-2009)
Nangona engazange ihlasele i-US ukuya ngo-2009, i-" REC " yaseSpeyin yangaphambi kokukhutshwa komdlalo wokutshintsha umdlalo "Umsebenzi weParanormal," okwenza iindaba ze-zombie-esque zivelele ngakumbi. Ngaphantsi koqobo kodwana phantse njengento yokuzonwabisa yi-American remake "." I-" REC" i- franchise yashiya ifomathi efunyenweyo-ye-footage yefilimu yesithathu neyesine.
"Ukutyelela" inguqu ehambelanayo yokuhamba kungekhona kuphela kumlobi-umlawuli uMnuz. Night Shyamalan , kodwa nangenxa yokufometha kweefayile ezithandwayo. Kudibanisa ngokucacileyo ngokulinganisela kakuhle kunye nokuhleka ngeendlela ezinamandla kunye nokuphelisa okugqibeleleyo.
I-hit smash hit eyayikunceda ekubambeni ukuhlaselwa kwezinto zombini kunye ne-horror budget-horror, "Umsebenzi weParanormal" waphefumlela ubomi kwindlela ebeyifumaneke ngayo, sibonga inxalenye yendawo yokutya kunye neendlela ezintsha zokukhusela ukhuseleko imifanekiso yekhamera. Nangona nganye ifilimu kwi- franchise yayingaphezulu kuneyona ngaphambi kwayo, ubuncinane bokuqala abathathu babenomdla ngokuqinileyo ngaphambi kokuba ibe yinto ehamba phambili.
Ibali elinoyiko eliyikrakra, "Iprojekthi yeBlair Witch" ngumgangatho apho iikhompyutri ze-horror ezifunyenweyo zanamhlanje zigwetywa ngayo. Eyoyikisayo. Akukho mfuneko yokuthetha ngaphezulu.
Njengokungena phakathi kwe-movie ye-monster blockbuster, "i-Cloverfield" ithatha ifomathi eqhelekileyo yokufumana imifanekiso kwaye iyayifaka kwi-big-life-size, i-Godzilla-esque esilinganisweni, eyenza uhlobo oluthile lwe-immersive, olwenziwe yi-adrenaline olwenziwe yi nyaniso kwiindaba zezesayensi kunye neengqungquthela ze-Spandex.
30 Iingqungquthela zoTshwayo zoTshwayo zeTrifer
Sikufuna iKrismesi eyoyikrakra: Iimfesi zeHrisimesi zeHrisimesi
I-10-Eyaziwayo I-Horror Villains Yokugqoka NjengaseHalloween
Uphando lwabafazi be-Ancestors ngokusebenzisa iMfashoni Yabo
I-Chrysler: I-brand ye-Brand or Not?
I-Federal Federal System
Indlela yokusebenzisa i-Personal Fetter okanye i-Anchor Chain yokunyuka
UkuPhulwa kweNqwelo lokuPhumela kweNqwelo
I-Knights Hospitaller - Abakhuseli abagulayo kunye namaPilgri ahlaselwe
Imithetho yeGalofu - Umgaqo-22: Ukuncedisa iBhola okanye Ukujongana nokudlala
Dewa mata suguni ne - Imifanekiso elula yesiJapane
I-Biography kaShirley Graham Du Bois
Isicwangciso seSifundo seMfutshane esifutshane